HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Vietnamianina Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | TE HIANATRA BAIBOLY VE IANAO?
Mitory no tena ahalalan’ny olona anay Vavolombelon’i Jehovah. Fantatrao ve anefa fa mampianatra Baiboly maneran-tany koa izahay?
Misy Vavolombelona any amin’ny tany 240, ary 8 000 000 mahery izahay, tamin’ny 2014. Nitarika fampianarana Baiboly efa ho 9 500 000 isam-bolana izahay tamin’io taona io. * Eritrereto ange e! Firenena 140 eo ho eo no manana mponina vitsy kokoa noho ny isan’ny olona mianatra Baiboly.
Ahoana no nahavitanay Vavolombelon’i Jehovah an’izany? Efa ho 1 500 tapitrisa isan-taona ny Baiboly, boky, gazety, ary zavatra hafa avoakanay, amin’ny fiteny 700 eo ho eo. Tena miavaka ilay izy! Natao izany rehetra izany mba hahafahan’ny olona hifidy hoe amin’ny fiteny inona izy no hianatra.
“Tsy tia nianatra mihitsy aho tany am-pianarana. Tiako be anefa ny nianatra Baiboly, sady nampahery ahy ilay izy!”—Katlego, any Afrika Atsimo.
“Voavaly daholo ny fanontaniako rehefa nianatra Baiboly aho. Betsaka koa ny zavatra lasa haiko.”—Bertha, any Meksika.
“Tany an-tranoko aho no nianatra, dia tamin’izay fotoana nety tamiko. Aiza indray aho no hahita hoatr’izany?”—Eziquiel, any Brezila.
“Naharitra 15 na 30 minitra indraindray ny fianaranay, na lava kokoa, arakaraka izay nety tamiko.”—Viniana, any Aostralia.
“Gaga be aho hoe maimaim-poana ilay izy!”—Aimé, any Bénin.
“Nanam-paharetana be ilay mpampianatra Baiboly ahy sady tsara fanahy. Lasa mpinamana be izahay.”—Karen, any Irlandy Avaratra.
“Be dia be no mianatra Baiboly fa tsy lasa Vavolombelon’i Jehovah.”—Denton, any Angletera.
FANONTANIANA FAMETRAKY NY OLONA MOMBA AN’ILAY FIANARANA
Ahoana no fizotran’ilay fianarana?
Misy foto-kevitra maro azo ianarana, ary jerena ny andinin-teny ao amin’ny Baiboly mifandray amin’ilay izy. Voavaly ao amin’ny Baiboly, ohatra, hoe iza Andriamanitra, hoatran’ny ahoana izy, iza no anarany, aiza izy no mipetraka, afaka mifandray aminy ve isika, sy ny sisa. Aiza ho aiza ao anefa ny valin’ireo?
Mba hahitan’ny olona ny valiny, dia matetika izahay no mampiasa an’ilay boky 224 pejy hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? * Natao hanampiana ny olona hahalala an’izay tena ampianarin’ny Baiboly izy io. Maro ny foto-kevitra ao, ohatra hoe momba an’Andriamanitra, Jesosy Kristy, ny fijaliana, ny fitsanganana amin’ny maty, ary ny vavaka.
Ary ahoana ny fotoana sy ny toerana ianarana?
Ianao no mifidy ny fotoana sy toerana mety aminao.
Adiny firy no ilaina isaky ny mianatra?
Betsaka ny olona mianatra adiny iray eo ho eo isan-kerinandro. Azo ovaovana anefa ilay izy, arakaraka ny fotoananao. Misy, ohatra, mianatra 10 na 15 minitra monja isan-kerinandro.
Ohatrinona ny saram-pianarana?
Maimaim-poana ilay fianarana sy ny boky ampiasaina. Hoy mantsy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Efa nahazo maimaim-poana ianareo, ka manomeza maimaim-poana.”—Matio 10:8.
Maharitra hafiriana ilay fianarana?
Miankina aminao ihany ilay izy. Misy lesona 19 ao amin’ilay boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? Azo vitaina haingana ilay izy nefa azo atao miadana koa arakaraka izay mety aminao, na inona na inona lesona tianao hianarana.
Tsy maintsy lasa Vavolombelon’i Jehovah ve aho rehefa mianatra Baiboly?
Tsia. Manan-jo hino an’izay tianao hinoana ianao, ary hajainay izany. Rehefa mahafantatra ny zavatra ampianarin’ny Baiboly anefa ianao, dia hahay hanapa-kevitra tsara.
Ahoana raha misy zavatra hafa tiako hanontaniana?
Misy fanazavana marina momba ny zavatra inoanay sy ataonay Vavolombelon’i Jehovah ao amin’ny tranonkala jw.org/mg.
Ary ahoana no hataoko raha te hianatra Baiboly aho?
Mandefasa fangatahana ao amin’ny www.jw.org/mg.
Na miresaha amin’ny Vavolombelon’i Jehovah eny akaikinareo.
^ feh. 4 Olona iray no ampianarina, na olona maromaro indray miaraka.
^ feh. 9 Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Efa mihoatra ny 230 tapitrisa no natao pirinty tamin’ny fiteny 260 mahery.
NATAO HO AN’NY MPIANAKAVY
“Niova be ny vadiko rehefa nianatra Baiboly. Lasa nahafinaritra ny fiainanay tao an-trano. Tiako ho fantatra àry hoe inona no nianarany, ka nianatra koa aho ary nihatsara ny toetrako. Lasa nifankatia izahay mianakavy noho ny fianarana Baiboly.”—Eziquiel.
“Afaka tamin’ny zava-mahadomelina sy ny toaka aho rehefa nianatra Baiboly. Tsy dia mora tezitra intsony koa aho. Madio sy milamina kokoa izao ny tranonay. Lasa tiako kokoa ny vady aman-janako, dia lasa tia manao zavatra mampifaly an-dry zareo aho. Izay aho vao tena sambatra.”—Karen.
“Nokianin’ny olona aho tamin’izaho nianatra Baiboly, fa ny vadiko indray niteny hoe: ‘Tsy miraharaha an’izay lazain’ny olona any aho. Ianao aza hitako hoe tena niova. Tohizo fa tsara!’ Izao ny fiainanay ao an-trano vao tena mahafinaritra.”—Viniana.
Afaka Manampy Ahy Hanana Fianakaviana Sambatra ve ny Baiboly?
Nanampy lehilahy sy vehivavy an-tapitrisany hanana fianakaviana sambatra ireo torohevitra ara-baiboly resahina ato.
Hizara Hizara Fianarana ho An’ny Rehetra
Ahoana no Atao Rehefa Mianatra Baiboly?